China Mpanamboatra kitapo plastika PE namboarina, mpamatsy, mpamokatra - Teny nalaina - MIMO FLOW CONTROL
Home > Kitapo plastika Kitapo plastika > Kitapo plastika PE
kojakoja fitafiana anjely co., LTD. Orinasa miavaka amin'ny famokarana karazana PE, PP, kitapo OPP ary kitapo tànana, ny kitapo karazana harona plastika indostrialy sy ara-barotra ary karazana kitapo lamaody ara-nofo, kitapo kosmetika, kitapo tsy tenona, fonosana kitapo, kitapo fiantsenana tontolo iainana ary karazana varotra fonosana blister rehetra,
1.fampidirana ny vokatraKitapo plastika PE:
kojakoja fitafiana anjely co., LTD. Orinasa miavaka amin'ny famokarana karazana PE, PP, kitapo OPP ary kitapo tànana, ny kitapo karazana harona plastika indostrialy sy ara-barotra ary karazana kitapo lamaody ara-nofo, kitapo kosmetika, kitapo tsy tenona, fonosana kitapo, kitapo fiantsenana tontolo iainana ary karazana varotra fonosana blister rehetra, vokatra be mpampiasa amin'ny fivarotana fivarotana lehibe, sakafo, fikarakarana ara-pahasalamana, kojakoja fanasan-tarehy, taratasy fidiovana, lamba lamba, vokatra ao an-trano, elektronika, fifandraisan-davitra, kilalao, fanomezana, plastika, orinasa sy vy.Ny vokatra rehetra an'ny orinasa dia nandalo fitsapana fiarovana ny tontolo iainana tsy misy poizina na ambany misy poizina any Eropa, Etazonia ary Japon.
2. Parameteran'ny vokatraKitapo plastika PE:
290mm * 205mm (habe namboarina)
Lafiny iray 0,09 mm (hatevin'ny namboarina)
CPE / Voalamina na toy ny fanaonao
Fanontana vita amin'ny gravy (hatramin'ny loko 9, fanontana vita pirinty)
Sariaka ara-tontolo iainana sy sakafo
Ampiasaina amin'ny fonosana fanomezana, kosmetika, fitehirizana, lamba, akanjo sns
Santionany maimaim-poana, mila mandoa ny entana fotsiny ianao.
Fanondranana fonosana mahazatra
fandefasana, fitaterana an'habakabaka, express iraisam-pirenena sns
3. Torolàlana momba ny fampiasana ny vokatra an'nyKitapo plastika PE:
4. Fonosana sy fitaterana
Tombon'nyKitapo plastika PE:hazavana sy mangarahara, voaporofo amin'ny hamandoana, mahatohitra ôksizenina, mahazaka asidra, mahazaka alkali, fahateren'ny rivotra ankapobeny, famehezana hafanana tena tsara sy fananana hafa.
MOQ dia 100 pcs. Raha ambany kokoa ny fehezan-dalàna dia 100 pcs, ny vola lany rehetra dia hitovy.
Izahay dia tsy afaka manome vidiny tena voafaritra tsara mandra-panamafisana ireo vokatra rehetra momba ny vokatra toy ny fitaovana, ny hateviny, ny teknolojia ary ny habetsahany. Noho izany azafady mba mifandraisa amin'ny varotra anay alohan'ny hametrahana baiko.
Tongava soa aman-tsara ny ohatra santionan'ny logo. Manodidina ny 40usd ny vidiny, miankina amin'ny teknika sy fitaovana samihafa.
Azontsika atao ny mandefa ny kitapo freestock ho anao (azonao atao ny manamarina ny vokatra fanontana sy ny bagquality), Amin'izany fomba izany dia mila mandoa ny saram-pandefasana ianao.
Rehefa mametraka kaomandy ianao dia mandefasa azafady amin'ny rakitra AI na PDF ho an'ny varotra anay. Ny fanemorana ny fandefasana zavakanto dia hanemotra ny fandefasana azy. Amin'ny tranga sasany, afaka manome maimaim-poana ny zavakanto isika (aorian'ny fandoavam-bola mba hanamboarana endrika tsotra). Ny orinasa dia hiroso amin'ny famokarana betsaka mifototra amin'ny kanto farany izay nohamafisinao.
5.FAMARANA LEVEL PRODUCTION
Ny fitarihana ara-dalàna ny famokarana dia 9-10workingdays. ny fotoana fanaterana dia manodidina ny 5-7 andro fiasana.
Kitapo plastika PPE
Kitapo adhesive OPP
Kitapo plastika PP